प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस प्रवक्ताको ‘प्रेमपत्र’ जनता भन्छन् ‘कात्रोमा पनि कमिसन?’ – Online National Network
प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेस प्रवक्ताको ‘प्रेमपत्र’ जनता भन्छन् ‘कात्रोमा पनि कमिसन?’
२० चैत्र २०७६, बिहीबार १५:५६
काठमाडौं, २० चैत – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोना संकटबाट देशलाई बचाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएका छन्। शर्माले बिहीबार ‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षी प्रवक्ताको प्रेमपत्र, समाधान कोरौं समाधी नखनौं’ भन्दै खुला पत्र लेखेका हुन्।
संकटको घडिमा पार्टीले सरकारलाई सघाउँदै आएको पनि शर्माले उल्लेख गरेका छन्। ‘प्रतिपक्षले सरकारलाई साथ दिनु भनेको ढिलासुस्ती, लापरवाही,अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई पनि समर्थन गर्नु होइन। बरु सबै कमजोरीबारे प्रश्न उठाएर तिनको निदान खोज्न घच्घच्याएर फेरि पनि सघाउनु संकटमुक्ति प्रतिको इमानदारीता हो,’ शर्माले भनेका छन्।
६) सरकारले ल्याएको राहतको प्याकेजलाई सकारात्मक रूपमा लिंदै त्यो अपर्याप्त रहेकोे ध्यानाकर्षण हामीले गरिसकेका छौं। प्रधानमन्त्रीज्यू हरेक बर्ष असार मसान्तमा हामीले फ्रीज हुन लागेको बजेट कनिकाझैं छर्ने गरेका छौं,यसपालि त्यो नछरौं। अहिले नागरिक जोगाऔं, पछि पुल हालौंला, बाटो बनाऔंला।
ज्यालादारी श्रमिककोमा राहत पुर्‍याउने तीब्रतामा ध्यान पुगोस्। रोजगार कार्यक्रमका नाममा अघिल्लो बर्ष पानी बगायौं हामीले अहिले बेरोजगार एवं सहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर बसेका विद्यार्थीलाई राहतको योजना तर्फ त्यो कार्यक्रमलाई किन नमोड्ने?
७) व्यवसायीलाई बैंक ब्याज घटाएर राहत अनुभूति गराउन सरकार किन गम्भीर नभएको? प्रधानमन्त्रीज्युको निर्देशन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जाओस्। २० लाखसम्म ऋण लिएका साना ब्यवसायीको हकमा तीन महिनासम्मको ब्याज समेत मिनाहा गरियोस्। आज यिनलाई जोगाए भोलिको अर्थतन्त्र यिनैले उठाउने छन् प्रधानमन्त्रीज्यू।